January 3, 2021 - ApannPyay Media
ဆီးချိုရှိနေလျှင် မမေ့ထားသင့်တဲ့ ဖန်ခါးသီး.
February 1, 2021 January 3, 2021 by ApannPyay Media
ဆီးချိုရှိနေလျှင် မမေ့ထားသင့်တဲ့ ဖန်ခါးသီး ဆီီးချိုရောဂါရှင်များအတွက်် ဖန်ခါးသီး ဆေးကျမ်းများ အဆိိုအရ ဖန်ခါးသီးမှာ “ဖန်၏ ၊ ချဉ်၏ ၊ စပ်၏ ၊ ပူ၏ ၊ ဝမ်းမီးကို တောက်စေသည်။ အထူးအားဖြင့် ဖန်ခါးသီးသည် အူလမ်းကြောင်းနဲ့ စပ်ဆိုင်တဲ့ ရောဂါများ ၊ အရေပြားရောဂါ ၊ ညောင်းကျ ၊ ကြို့ထိုး ၊ ဗိုက်အောင့် ၊ အစာမကြေရောဂါများ ” ကုသရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖန်ခါးသီး အမှုန့််ကို ပျားရည် ထောပတ်တိို့နှင့် ရောစပ်သောက်သုံးလို့ ရပါသတဲ့ အဲဒီ့လို သုံးစွဲရင် အင်အား တိုးပွားစေတယ်။ သွားကိိုက်၊ သွားနာ၊ သွားပိုးစား၊ ရေစီးကမ်းပြို စသည့် သွားဝေဒနာအမျိုးမျိုး ပျောက်ကင်းသက်သာစေရန် ဖန်ခါးသီးအစို … Read more
ရင်တုန်ပြီး အိိပ်မပျော် စားမဝင် ပိိန်ချူံးကျူံလှီ နှလုံးအားနည်းသူများ အတွက် အဖိုးတန်သည့် မဂျစ်ဥ
January 3, 2021 by ApannPyay Media
ရင်တုန်ပြီး အိိပ်မပျော် စားမဝင် ပိိန်ချူံးကျူံလှီ နှလုံးအားနည်းသူများ အတွက် အဖိုးတန်သည့် မဂျစ်ဥ မဂျစ်ဥ နှလုံးသွေးအားနည်းပြီး မူး မော ရင်တုန် အိိပ်မပျော်စားမဝင် ပိိန်ချူံးကျူံလှီ နှလုံးအားနည်းသူများ အဆုတ်ရောဂါဝေဒနါသည်များအတွက််………… မဂျစ်ဥ သည် ခါးသောအရသာရှိိသည့် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းရေခဲတောင်ပေါ်များ၌သာပေါက်သည်အစွမ်းထက်ဆေးဥ တစ်မျ်ိုးဖြစ်ပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အို ရုပ်ဓာတ်ကျဆင်းပြီး အားအင်ဆုုတ်ယုတ်နေ ​သူများ မဂျစ််ဥကို နံနက်တစ်ဥ ညတစ်ဥ ပျားရည်လဖက်စားဇွန်းတစ်ဇွန်းဖြင့်သောက်ပါ။ အပူအားကြီးပြီး နှှလုံးသွေးအားနည်းသူများ အပူအပုပ်အခိုးအပေါ်ပိုင်းနှလုံးကိုလောင်မြိုက်သဖြင့် နှလုံးသွေးအားနည်းပြီး နှလုံးတုန်ခြင်း မူးမော အိိပ်မပျော် စားမဝင်ခြင်း ပိိန်ချူံးခြင်းအတွက် မဂျစ်ဥ နံက်တစ်ဥ ညတစ်ဥ ပျားရည်(သို့)ရေနှင့်သောက်ပါ။ အဆုတ်ရောဂါအတွက် နံက်အိိပ်ရာထ ညအိိပ်ရာဝင် မဂျစ်ဥတစ်ဥစီကို ရေနှင့်သောက်ပါ။ နာတာရှည် မကျန်းမာသူများလည်း မဂျစ်ဥ တစ်ဥစီကို နံံနက်ညရေအေးဖြင့်သောက်ပေးပါ ကျန်းမာသက်ရှည်စေပါသည်။ သမားတော်ကြီး … Read more
သင့်ဖုန်း မှန်ကွဲနေတာကို မပြင်ဘဲ ဆက်သုံးနေရင် ဖြစ်လာမယ့် ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးတွေ
သင့်ဖုန်း မှန်ကွဲနေတာကို မပြင်ဘဲ ဆက်သုံးနေရင် ဖြစ်လာမယ့် ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးတွေ စမတ်ဖုန်း ကိုင်ဆောင်ရတဲ့သူတိုင်း အချိန်မရွေးကြုံတွေ့လာနိုင်တာကတော့ ဖုန်း မှန်သားပြင် ကွဲသွားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ နည်းပါးလွန်းတဲ့ ပမာဏ မဟုတ်တာကြောင့် အသစ် တစ်လုံးနဲ့ ချက်ချင်းလဲဖို့ဆိုတာလည်း သိပ်တော့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ဖုန်းမှန်ကွဲ နေပေမယ့် ဆက်သုံးတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုလည်း ဒီ ဆိုးကျိုး လေးတွေ သိအောင် ဝေမျှ ပေးလိုက်ပါဦး။ ဖုန်းမှန်ကွဲ ရာကနေ စိစိညက်ညက်ကြေနိုင်။ အက်ရာရှိနေတဲ့ ဖန်သားပြင် ဟာ ပြန်မကောင်းလာနိုင်တဲ့အပြင် ပိုဆိုးသွားဖို့ပဲရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပိုမို အက်ကွဲလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဖန်သားစ တွေဟာ … Read more
နံနက် ၁၀ နာရီ မတိုင်ခင် အလုပ်ချိန်စခြင်းက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ပညာရှင်များဆို
နံနက် ၁၀ နာရီ မတိုင်ခင် အလုပ်ချိန်စခြင်းက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ပညာရှင်များဆို အိပ်ယာ အစောကြီး ထ၊ မနက် (၁၀) နာရီ မတိုင်ခင် အလုပ်သွားရတာဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ပြင်းထန် ကြီးမားတဲ့ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူကြောင်း အောက်စ်စဖို့ တက္ကသိုလ်ရဲ့ စူးစမ်းလေ့လာရေးဦးဆောင်သူ ဒေါက်တာ Paul Kelly ကဆိုပါတယ်။ ဆက်ကာဒီယံ ရက်သမ် (သို့) ခန္ဓာအတွင်းက နာရီဟာ ဇီဝအချိန်တိုင်း ကိရိယာအဖြစ် ကိုယ်စားပြုပြီး လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လည်ပတ်မှုတွေကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် ဒီ မျိုးရိုး ဗီဇအလိုက် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ဖို့ စီမံထားတဲ့ စက်ဝန်းက အချိန်တွေကို သိမြင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ဖန်ရှင်၊ စွမ်းအားအဆင့်နဲ့ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းညှိပေးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ယာက … Read more
လုံးဝ(လုံးဝ) မစားသင့်သော အစားအစာ (၁၀) မျိုးနှင့် အိပ်ခါနီးမှ စားသင့်သည့်အရာများ
လုံးဝ(လုံးဝ) မစားသင့်သော အစားအစာ (၁၀) မျိုးနှင့် အိပ်ခါနီးမှ စားသင့်သည့်အရာများ ကျွနု်ပ်တိုရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်သာမကပဲ နောက်နေ့မှာစိတ်ကြည်စေဖို့အတွက် ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ညစာအဖြစ်စားတဲ့ အရာပေါ်မူတည်ပြီး ကလေး တယောက်လိုအိပ်ပျော်လား အိပ်မပျော်တဲ့ ရောဂါဖြစ်လားဆိုတာကွဲပြားသွားပါတယ်။ သင်​အိမ်မက်ကောင်းတွေမက်ပြီး အိပ်ပျောိစေဖို့အတွက် ညနေစာအဖြစ် စားသင့်​တာ မစားသင့်တာတွေကို သုတေသနလုပ်ထားပါတယ်… စားသင့်သည့်အရာများ ၁။ငှက်ပျောသီး သူတို့မှာ မက်ဂနီစီယမ်နဲ့ ကယ်လ်စီယမ်ပါဝင်တဲ့ အတွက် ကြွက်သားတွေ ထုတ်လုပ်စေပြီး ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေဖို့ အာမခံပါတယ် ၂။ကြက်ဆင် မအိပ်ခင် ၁ နာရီခွဲ နှစ်နာရီခန့် တွင်ကြက်ဆင်အနည်းငယ်စားပေးခြင်းဖြင့် အမြန်အိပ်ပျော်စေပါတယ်။အိပ်ခြငိးကိုနည်းလမ်းတကျဖြစ်စေသော tryptophinလဲပါတဲ့ အသားဖြစ်ပါတယ်် ၃။နိ့ နို့မှာလဲ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တမျိုးဖြစ်တဲ့ tryptophin ပါတဲ့အတွက် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့် ကြာကြာအိပ်စေပါတယ်။မိခင်များနို့တိုက်ခြင်းကအကြောင်းမဲ့ မဟုတ်ပါ။ု ၄။ ဆန်မွှေး ဆန်မှွေးကိုစားခြင်းက … Read more
ဆရာဝန်တောင်မယုံနိုင်တဲ့ သွေးကြောများအတွင်း ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အဆီတွေကို ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကြွက်နားရွက်မှို ကျော်မသွားနဲ့ ဖတ်ပါ…မိမိ friends များအတွက်ရှယ်ပေးပါ.. အရင်အပတ်က နှလုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို ပြောပြခဲ့တယ်….. ဒီအပတ်မှာတော့ အဲဒီ့လိုပိတ်ဆို့နေတာကို အလွယ်တကူရှင်းထုတ်ပစ်နိုင်တဲ့ နည်းကောင်းတစ်ခုကို ပေးပါမယ်၊America မှာ ချမ်းသာတဲ့တရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်…. ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ဘဲသားစတဲ့ ကုန်းသတ္တဝါအသားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ အမြဲတန်းစားလေ့ရှိသူပေါ့၊ လှုပ်ရှားမှုကလည်း သိပ်မရှိဘဲ ဇိမ်ခံတာသာများတယ်… အသက်နဲနဲရလာတော့ ရင်ဘတ်ကအောင့်အောင့်လာတယ်၊ဒါနဲ့သူလည်း ဆရာဝန်ကိုသွားပြရတာပေါ့၊ ဆရာဝန်ကစစ်ကြည့်လိုက်တော့ နှလုံးသွေးကြောတွေ ၃ချောင်းလုံး 90% ပိတ်နေပြီ ခွဲစိတ်ကုသမှရမယ်ဆိုပြီး သူကိုရက်ချိန်းပေးလိုက်ပါတယ်…. သူလည်း စိတ်တော်တော်ညစ်သွားပြီး တရုတ်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးတွေဆီကို သွားပါတယ်၊တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးက သူ့ကိုနေ့စဉ်ကြွက်နားရွက်မှိုကို စားခိုင်းပါတယ်…. ဘာဟင်းချက်ချက် ကြွက်နားရွက်မှိုသုံးလေးခုလောက် ထည့်ချက်ပြီး စားခိုင်းတော့ သူလည်းမပျက်မကွက် စားပါတယ် ဒီလိုနဲ့ ၃ပတ်အကြာ ဆရာဝန်ဆီပြန်ပြတော့ … Read more
မွေးမြူရေး တီလားပီးယားငါးစားခြင်းက ကျန်းမာရေးကိုပိုထိခိုက်စေနိုင်
မွေးမြူရေး တီလားပီးယားငါးစားခြင်းက ကျန်းမာရေးကိုပိုထိခိုက်စေနိုင် လက်ရှိအချိန်မှာ တီလားပီးယား (Tilapia) ငါးမျိုးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဝယ်ယူရအလွယ်ဆုံးနဲ့ စျေးချိုသလောက် ကင်စားရင် အရသာရှိတဲ့ ငါးအဖြစ် ပြောချင်လွန်းလို့တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြုံတွေ့နေရမှာပါ။ ဒီငါးတွေဟာ ဟိုးရှေးရှေးထဲက ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ရှင်သန်ခဲ့ကြပြီး လူကြိုက်များတဲ့ ပင်လယ်စာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တီလားပီးယားငါးတွေကို အာဖရိကမှာ စတင်တွေ့ရှိ စားသုံးခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အပူပိုင်းရာသီဥတုရှိတဲ့ အင်ဒို၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်းနဲ့ မလေးတို့လို နိုင်ငံတွေမှာ အကြီးအကျယ်မွေးမြူစားသုံးလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်မှာ မွေးမြူတဲ့ တီးလားပီးယားတွေကို နိုင်ငံအတွင်းမှာသာ စားသောက်လေ့ရှိပြီး အလည်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကလည်း ဒါကို အဖြူရောင်အသားဆိုပြီး နှစ်သက်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေက နာမည်ကြီး စားဖိုမှူးတွေကတော့ ဒီငါးရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အသားအရသာကြောင့် ဟင်းပွဲအဖြစ် ဖန်တီးလိုကြတယ်။ ပြောချင်လွန်းလို့ တို့ … Read more
ဒူးရင်းသီးနဲ့တွဲဖက်ပြီး စားလို့မရတဲ့အစားအစာများ (သေနိုင်) အခုချိန်မှာသတိပြုပါနော်
ဒူးရင်းသီးနဲ့တွဲဖက်ပြီး စားလို့မရတဲ့အစားအစာများ (သေနိုင်) အခုချိန်မှာသတိပြုပါနော် ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်တော့ အနံ့အလွန်မွှေးပြီး အရသာရှိလှတဲ့ ဒူးရင်းသီးဟာ အာဟာရဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါရှိတာမှန်ပေမယ့် အလွန်အကျွံစားသုံးတဲ့အခါနဲ့ တွဲဖက်မစားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးမိမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒူးရင်းသီးနဲ့တွဲဖက်ပြီးမစားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဒူးရင်းသီးစားသုံးပြီးတဲ့အခါနဲ့ မစားသုံးခင်မှာ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်အစရှိတဲ့ အယ်လ်ကိုဟော ပါဝင်တဲ့ အရည်တွေ သောက်သုံးခြင်းကို အထူးရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ တွဲဖက်စားသုံးခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောပေါက်ခြင်းနဲ့ လေဖြတ်နိုင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် တွဲဖက်စားသုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ (၂) သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ဒူးရင်းသီးစားပြီး နို့ထွက်ပစ္စည်းများ ထပ်မံစားသုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် သေစေနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် သတိပြုဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ (၃) ဒူးရင်းသီးစားပြီး ခရမ်းသီးစားခြင်းဟာ အပူစာနှစ်ခုကို တပြိုင်နက်တည်းစားသုံးသလိုဖြစ်တာကြောင့် အပူများပြီး … Read more
အစာအိမ်သမားများ ဆောင်အပ်သောဆေး ရှယ်ပြီး သိမ်းထားသင့်တဲ့ ဆေးနည်းလေးပါ
အစာအိမ်သမားများ ဆောင်အပ်သောဆေး ရှယ်ပြီး သိမ်းထားသင့်တဲ့ ဆေးနည်းလေးပါ အစာအိမ်သမားများဆောင်အပ်သောဆေး” ရှယ်ပြီးသိမ်းထားသင့်တဲ့ဆေးနည်းလေးပါည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြစ်ရကာ ပျို့အန်ခြင်း၊သွေးဝမ်းသွားခြင်းပင်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထိုဝေဒနာများမခံရအောင် နည်းကောင်း လေးတင်ပြ အပ်ပါသည် (၁) ငှက်ပျောသီးဖီးကြမ်း(၂)ဖီးကို အခွံနွှာပြီးပါးပါးလှီ၍နေတွင်လှန်းပါ။ပြီးလျှှင်အမှုန့်ကြိတ်ပါ (သို့)ထောင်းပါ။ (၂) နွယ်ချိုမှုန့်ဟင်းခပ်ဇွန်း (၂)ဇွန်းမျှထည်ပါ။ (၃) နနွင်းမှုန့်စစ်စစ် ဟင်းခပ်ဇွန်း(၁)ဇွန်းထည့်ပါ။ ထို(၃)မျိုးကို ရောစပ်ပြီး လေလုံသောဖန်ဗူးထဲသို့ ထည့်ထားပါ။ သုံးစွဲရန် နေစဉ်နံနက်တစ်ကြိမ်/ညတစ်ကြိမ် ကော်ဖီဇွန်း(၁)ဇွန်းက ိုပုံမှန် စားပေးပါ။ ထိုဆေးသည် အစာအိမ်ကို အားရှိစေပြီးအစာအိမ်နာ၊ လေအောင့် လေနာနှင့် အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ခြင်းကင်းဝေး စေပြီး အစာအိမ်ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းစေပါကြောင်း။ သိမီသမျှ အစာအိမ်ဆေးနည်းအားတင်ပြလိုက််ပါသည်။ နွယ်ချိုမှုန့်ကို ပရဆေးဆိုင်တွင်လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Credit:ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်) naethitmyanmar အစာအိမ္သမားမ်ား ေဆာင္အပ္ေသာေဆး ရွယ္ၿပီး သိမ္းထားသင့္တဲ့ ေဆးနည္းေလးပါ အစာအိမ္သမားမ်ားေဆာင္အပ္ေသာေဆး” ရွယ္ၿပီးသိမ္းထားသင့္တဲ့ေဆးနည္းေလးပါ … Read more